Akụkọ - Mgbochi Ọrịa Coronavirus
Banyere nke bu ezigbo ihe ohuru sitere na World Health Organisation na November 5, 2020, oria 47millions ohuru ohuru ohuru achoputala n’uwa dum, na onwu 1.2millions. Site na Mee 7th, obodo niile dị na China ka agbanweela na obere ihe egwu na "efu" na mpaghara ndị nwere nnukwu nsogbu, nke pụtara na China enwetala mmeri a na-egbochi ọrịa ntipụ nke coronavirus ọhụrụ. Dị nke ọrịa na-efe efe ka dị oke njọ. Director General nke WHO Dr. Tan Desai kwuru na ogbako a na mgbasa ozi a na-egosi ma usoro ahụike mba na nke obodo siri ike ma rụọ ọrụ dị mkpa na ntọala nke nchekwa ahụike ụwa na mmetụta mkpuchi ahụike zuru ụwa ọnụ.
Mgbe mmalite nke ọrịa COVID-19 na China, gọọmentị China zara ọsọ ọsọ ma nakweere usoro mgbochi ọrịa zuru oke iji gbochie mgbasa nke nje ahụ. Omume ndị dị ka “imechi obodo ahụ”, imechi obodo ime ihe, ikewapụ iche, na ịmachi ime ihe ndị dị n’èzí mere ka mgbasa nke coronavirus gbasaa n’ụzọ dị irè.
Hapụ ụzọ gasị metụtara nje ahụ, gwa ndị mmadụ etu esi echebe onwe ha, gbochie ebe ndị ọdachi ahụ metụtara, ma kewapụ ndị ọrịa na ndị na-akpachi anya. Mesie ike ma tinye usoro iwu na ụkpụrụ iji chịkwaa ihe iwu na-akwadoghị n'oge mgbochi ọrịa, ma hụ na mmejuputa usoro mgbochi ọrịa site na ịchịkọta ndị agha obodo. Maka mpaghara ọrịa na-efe efe, kpokọta nkwado ahụike iji wuo ụlọ ọgwụ pụrụ iche, ma setịpụ ụlọ ọgwụ n'ọhịa maka ndị ọrịa dị nro Isi okwu kachasị mkpa bụ na ndị China erutela nkenke banyere ọrịa ahụ ma na-arụsi ọrụ ike na iwu mba dị iche iche.
N'otu oge ahụ, a na-ahazi ndị nrụpụta ngwa ngwa iji mepụta usoro ụlọ ọrụ zuru ezu maka igbochi ọrịa na-efe efe. Uwe mkpuchi, nkpuchi, ọgwụ na ihe nchebe ndị ọzọ ọ bụghị naanị na-egbo mkpa nke ndị nke ha, kamakwa nye ọtụtụ mba ihe mgbochi ọrịa na mba ụwa niile. Gbalịsie ike iwepụ ihe isi ike ọnụ.
Masks, akwa nchekwa, na ọgwụ na-egbu nje chọrọ ndị mmadụ n'ụwa niile dịka ihe nchekwa nchekwa CONVID-19. Ahịa maka nkpuchi, uwe nchedo, ọgwụ nje, wdg. Siri ike maka ọtụtụ mba.
Dị ka ezigbo disinfection gị n'ụlọnga, sodium hypochlorite amị usoro a na-mkpa ọtụtụ ndị ahịa n'ụwa nile.
Ro Well Water Ọcha Myọcha, Ro Water Myọcha akụkụ, Professional Water Myọcha System, Mmiri Osimiri Na-a Dụ Ngwa igwe, Nhazi System Sodium Hypochlorite, Usoro Ro Desalination,